ဘရာစီယာ မဝတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ရှိ by popolay.com
ယူအက်စ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
ထိုင်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးအသစ် တီထွင်ပြီး မျောက်များတွင်စမ်းသပ်
အာရှတစ်ခွင် ဒုက္ခကြုံနေရတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများထဲ မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်
ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ပုံစံသစ်ဖြင့် ရန်ကုန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
ကန့်သန့်ချက်များဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားသည့် က.ည.န ရုံးများ
မလေးရှားတွင် သင်္ကြန်ကျခဲ့သူ မြန်မာအလုပ်သမား ၆၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ (ရုပ်သံ)
မွေးရာပါ ပါးစပ်နှစ်ပေါက်ပါလာသူ ကလေးငယ်အား ဖြတ်တောက် ခွဲစိတ်ကုသ
ထူးထူးဆန်းဆန်း ကွင်းထိုးဖိနပ်တွေကိုမှ ကာမစိတ်စွဲလန်းပြီး ခိုးယူသူအား ဖမ်းဆီးရမိ
Mask တွေသုံးပြီး ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ Lockdown ဥပဒေကို ဆန္ဒပြသူ အမျိုးသမီး ဝေဖန်ခံရ
Netflix ကို အကြာကြီးပစ်ထားသူများ အကောင့်ပျက်မည်
ဘယ်လိုအစားအစာတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တည်ဆောက်ရမလဲ.. ?
အကင်များအား ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် ဘယ်လို လုပ်စားရမလဲ..?
ပါးစပ်အနာပေါက်ခြင်းကို လျှင်မြန်စွာကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၁၅)ခု
အာရှအမျိုးသမီး ဖက်ရှင် ရဲ့မရှိမဖြစ် Gentle Monster
iOS 13.5 အသစ်တွင် Covid-19 လူနာအား ထောက်လှမ်းနိုင်မည့် စနစ်ပါဝင်လာ
၂၀၂၀ အတွက် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲအောက် အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၅ မျိုး
အကယ်ဒမီ သီဟတင်စိုး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြင့် ကျိုက်လတ်တွင် အမှုဖွင့်ခံထားရ
နာဆာနဲ့ လက်တွဲပြီး အာကာသထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မည့် "တွန်််မ်ခရုစ်"
Covid-19 ရံပုံငွေပွဲကြီးတွင် ဟောလိဝုဒ်နှင့် ဘောလိဝုဒ် အကျော်အမော်များ အွန်လိုင်းမှဖျော်ဖြေ
အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတဲ့ လူသားကဏန်းပေါင်းစက် (ရုပ်သံ)
ဘရာစီယာ မဝတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ရှိ
21 May 2019 11,827 Views
“No Bra Day” ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုံဆော်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တော့ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘရာစီယာ မဝတ်ဘူးဆိုရင် မည်မျှပင်သေးငယ်တဲ့ ရင်းသားဖြစ်စေကာမူ ကျန်းမာရေးအရ အမျိုးသမီးတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အထောက်အထားတွေနဲ့ အကြံပေးထားပါတယ်။
“ဘရာစီယာ မဝတ်တာ ဒါမှမဟုတ် ဆိုဒ်မှားပြီးဝတ်တာတွေကြောင့် ခေါင်းအုံခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်နာခြင်း နဲ့ ရင်သားနာကျင်ခြင်း စတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်၊ ရင်သား တွဲကျလာပြီး ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့ ပြောနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး” ဟု ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသမီးအတွင်းခံအမှတ်တံဆိပ် Triumph Lingerie ရဲ့ ကိုယ်တိုင်းကျွမ်းကျင်သူ Paula Svodoba က ပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ ကီလိုနဲ့ ချီတဲ့ ရင်သားရဲ့ အလေးချိန်ကို လွယ်ထားကြရပါတယ်။ ဒီလိုအလေးချိန် ဝန်ကို ထမ်းကြရတဲ့နေရာမှာ ပေါ့ပါးသွားအောင် ဘရာစီယာက အများကြီးကူညီပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရာစီယာ မဝတ်ပဲနေတဲ့အခါ ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို နောက်ကျော ကြွက်သားတွေက ထမ်းရပါတော့တယ်။
“ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားဟာ သေးလို့ ဒီလိုသက်ရောက်မှုတွေ မရှိဖူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရင်းသားဟာ ဘရာစီယာဆိုဒ် A ဒါမှမဟုတ် B လောက်ဆိုရင်တောင် နဂိုအတိုင်း ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့ ရင်သားတွဲကျတဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးအမျာစုက ရင်သားတွဲကျတာဟာ အဓိကအားဖြင့် ရင်သားအကြီးအသေးနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ပဲ မှတ်ယူထားကြတာပါ၊ တစ်ကယ်တော့ အဲဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး” လို့ Paula က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အထိန်းအကွပ်မရှိတဲ့ ရင်သားရဲ့ လှုပ်ခါမှုတွေကနေ အဆီတစ်ရှုးနဲ့ အရွတ်တွေကို ဆွဲဆန့်သလိုဖြစ်ပြီး ရင်သားတွဲကျမှုကို ဖြစ်စေတာပါ၊ အရွယ်အစားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး”
ရင်းသား အသေးဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ A ဆိုဒ်သမားတွေဟာ အကြီးဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ E ဆိုဒ်သမားတွေလိုပဲ ဘရာစီယာကို ကိုယ့်အရွယ်အစားနဲ့ ကွက်တိဖြစ်အောင် ဝတ်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ ဘရာစီယာမဝတ်ပဲ နေချင်နေတိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မဝတ်ပဲအကြာကြီး ပစ်ထားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး လို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
အီစီးကရက် စွဲသောက်မှုကြောင့် အဆုတ်နှစ်ခြမ်းစလုံး ကုလိုမရအောင်ပျက်ဆီး
ဆီးချိုရောဂါ ရှိ၊ မရှိ စောစီးစွာသိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၁၀)ရပ်
HIV ရောဂါကို ဆေးခြောက်ပင်နဲ့ ကုသနိုင်ကြောင်း ကူးစက်ခံထားရသူ အခိုင်အမာပြောဆို
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရာနေရာက အမျိုးသမီး အခြားအိမ်တံခါးများကို တံတွေးနဲ့လိုက်ထွေး
ဝူဟန်ဈေးထဲကနေ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပေါက်ပွားခဲ့ရတဲ့ ဇစ်မြစ်
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လင်းနို့စွပ်ပြုတ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြဝေဖန်(ရုပ်သံ)